कस्ता व्यक्तिलाई लिभर क्यान्सर हुने खतरा हुन्छ ? जान्नुहोस् - ज्ञानविज्ञान
कस्ता व्यक्तिलाई लिभर क्यान्सर हुने खतरा हुन्छ ? जान्नुहोस्
कलेजो हाम्रो शरीरको सबैभन्दा ठूलो अंग हो । यो लगभग एक–साढे एक केजीको हुन्छ । कलेजोले हाम्रो शरीरमा आवश्यक पर्ने प्रोटिन र आल्मुनियम जस्ता थुप्रै तत्वहरु बनाउँछ । यसका काम अनेकौं हुन्छन् । यसमध्ये पनि मुख्य भनेको शरीरको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्नु हो ।
हामीले खाएको खाना कलेजोमा जान्छ र सुगर तथा पोषिलो तत्व बढेको हुन्छ । नखाएका बेलाका लागि पनि यसले ‘व्यालेन्स’ गरिराखेर व्यवस्थापन गर्छ । केही हानिकारक कुरा खाइएमा त्यसलाई फाल्ने काम पनि कलेजोले गर्छ । हामीले खाएका औषधी कलेजोमा गएर मेटाबोलाइज हुन्छन् ।
हाम्रो रगतमा हेमोग्लोविन हुन्छ जसले अक्सिजन लिन्छ । यसलाई रातो बनाउने काम रक्तकोषिकाले गर्छन् जो १ सय २० दिनमा मर्छन् । रक्तकोषिकाहरु मरेपछि हेमोग्लोविन पहेंलो पदार्थमा परिणत हुन्छ । यसलाई ‘कन्जुकेट’ गरेर फाल्ने काम कलेजोले गर्छ ।
कलेजो एउटा सिंगो अलग प्रकारको अंग हो । यसमा बिभिन्न समस्या आउन सक्छ, कुनै पनि कारणले बिग्रिन सक्छ । कुनै पनि कारणले बिग्रिएर सुन्निने समस्यालाई ‘हेपाटाइटिस’भनिन्छ । यो अल्पकालिन र दीर्घकालिन दुवै हुन सक्छ । कुनै विशेष कारणवश् सात दिनदेखि दस दिनमा समस्या आएमा त्यो अल्पकालिन हुन्छ ।
उदाहरणका रुपमा, एकै दिनमा कसैले धेरै पारासिटामोल खाए त्यसले कलेजोमा हानी गर्छ । त्यो बेलामा कलेजो बिग्रिन सक्छ जो उपचार पछि निको हुन्छ । छ महिनाभन्दा बढी नरहनेलाई अल्पकालिन हेपाटाइटिस भनिन्छ ।
हेपाटाइटिस ‘ए’ र ‘इ’ सरुवा हुन्छन् जसलाई जण्डीस पनि भनिन्छ । यो पानीबाट सर्छ जसले कलेजो संक्रमण गर्छ । एकदेखि तीन महिनासम्ममा आफंै हराएर जाने पानीबाट सर्ने हेपाटाइटिस हो ।
हेपाटाइटिस ‘बि’ र ‘सी’ले भने लामो समय दुःख दिन्छन् । किटाणु शरीरमा रहेसम्म यसले कलेजो बिगार्ने काम गरिरहन्छ । यसलाई दीर्घकालिन हेपाटाइटिस भनिन्छ ।
अल्पकालिन हेपटाइटिस (जण्डिस) मा खान मन नलाग्ने, वाकवाक लाग्ने हुन्छ । दीर्घकालिनमा यस्तो लक्षण देखिदैंन । यसले त धमीराले काठ खाएझैं विस्तारै हानी गर्छ । खोक्रो बनाइसकेपनि दसौं वर्षसम्म थाहा नहुन सक्छ । कलेजो कडा हुँदै जान्छ भने कालान्तरमा क्यान्सर वा कलेजो फेल हुन सक्छ ।
हिजोआज कलेजोमा बोसो जम्ने समस्या देखिन थालेको छ । यो बोसोले कलेजोलाई बिस्तारै–बिस्तारै हानी गर्छ। यसले १५–२० वर्षमा कलेजो फेल गराउने वा क्यान्सर हुने सम्भावना बढ्छ। दैनिक वा लामो समयसम्म अत्यधिक रक्सी सेवन गरेमा हेपाटाइटिस हुन्छ ।
१. . मृगौलाका रोगी
डाइलोसिस गर्ने व्यक्तिलाई संक्रमणका कारण कलेजो क्यान्सरको खतरा बढेर जान्छ ।
२. मधुमेहका रोगी
मधुमेहका कारण ‘नन अल्कोहलिक फ्याटी लिभर’ नामक रोगको शिकार हुन पुग्छ, जुन क्यान्सरको कारण बन्न सक्छ ।
३. बढी मोटोपन भएका
मोटोपनका कारण कलेजोमा बासो बढ्छ, जसबाट क्यान्सर हुने सम्भावना बढ्न सक्छ ।
४. बढी मदिरा सेवन गर्ने
मदिरा बढी सेवन गर्नाले ‘लिभर सिरोसिस’ नामक रोग हुनसक्छ, जुन क्यान्सरमा परिवर्तन हुन्छ ।
५. हेपाटाइटिसका बिरामी
हेपाटाइटिस-बी र सीका कारण कलेजो बढी खराब हुनसक्छ, जुन क्यान्सर पनि हुनसक्छ ।
कलेजो बिग्रेको कारण अनुसार यसको उपचार गर्नुपर्छ। रक्सी वा कुनै औषधिका कारण कलेजो खराब भएको भए पहिले ती कुरा खान बन्द गर्नुपर्छ । राम्रो खाना र आराम भयो भने बिस्तारै समस्या कम हुँदै जान्छ ।
हेपटाइटिस ‘ए’ र ‘इ’ तीन महिनाभित्र सामान्य हुँदै जाने भए पनि यो समयमा राम्रो आहार लिनुपर्छ । सुरुमा केही औषधि खान परे पनि पछि पर्दैन ।
दीर्घकालीन हेपाटाइटिसमा पनि कारण पत्ता लगाई उपचार गरिनुपर्छ । कारण रक्सी भए बन्द गरेर वा कलेजोमा बोसो जमेको भए तौल घटाएर उपचार गर्नुपर्छ । बोसो जमेको भए चिल्लो कम खाने, व्यायाम गर्ने र आवश्यक परेमा औषधि पनि खानुपर्छ ।
हेपाटाइटीस हुँदा लापरबाही गर्नुहुँदैन । अल्पकालिन खालेमा जथाभावी जडीबुटी औषधी खाने वा अनावश्यकरुपमा खाना बार्ने गरेमा निको हुन समय लाग्छ ।
कहिलेकाँही जडीबुटीले पनि कलेजो खराब गर्न सक्छ । त्यसैले जन्डिस हुँदा कलेजो बिग्रिने धेरै हुन्छन् । यस्तो बेलामा खाना बार्ने पनि होइन बरु राम्रो र पोषिलो खानुपर्छ ।
कलेजो बिग्रिएको बेला यसलाई चाहिने पोषण नभए झनै समस्या समाधान हुँदैन । जथाभावी औषधि खाने वा हेलचेक्र्याँइ गरेमा कलेजो सुन्निने, रगत नै वान्ता हुने लगायतका समस्या आउँछन् । त्यो अवस्थामा कलेजोले काम गर्न छाडेको हुन्छ । तर, यस्तो अवस्थामा पुग्न कलेजो बिग्रेदेखि १५–२० वर्ष लाग्छ । जसको उपचार भनेको कलेजो फेर्नु हो ।
त्यसैले यहाँसम्म पुग्नुअगावै जाँच गराउनुपर्छ। समयमै कलेजोको समस्या पहिचान र उपचार गर्न सकियो भने यसलाई जोगाउन सकिन्छ ।
समान्यतया कलेजोमा समस्या आएको थाहा हुँदैन। कलेजो बिगार्ने कीटाणु बिस्तारै सक्रिय हुन्छन्। तर कलेजो खराब भइसकेपछि थकान हुने र खुट्टाको मासु सुन्निने जस्ता लक्षण भने देखिन्छन् ।
कलेजोले कामै नगर्ने भएपछि भने जन्डीस बढ्ने, रगत वान्ता हुने, पेट सुन्निने र त्यहाँ पानीको मात्रा बढ्ने जस्ता समस्या आउँछन् जुन दीर्घकालिन हेपाटाइटिसका लक्षण हुन् ।
अल्पकालिन हेपाटाइटिसमा भने केही दिन खाना अरुचि हुने र पेटको माथिल्लो भागमा दुख्ने हुन्छ । यो दुई–तीन हप्तामा विस्तारै सुधार हुँदै जान्छ। यसमा लक्षण चाँडो देखिन्छ र निको पनि चाँडो नै हुन्छ ।
कलेजो कसरी जोगाउने ?
कलेजोको समस्या हुन नदिन अत्यधिक रक्सी खानु हुँदैन । कहिलेकाँही खाने गरेपनि लतका हिसाबमा दैनिक र धेरै भने खानु हुँदैन ।
बेलाबखत हेपाटाइटिस ‘बि’ जाँच्नुपर्छ । सामान्य मानिसमा पनि यो हुनसक्छ । यो सर्ने सम्भावना १५ वर्ष मुनिकालाई बढी हुन्छ भने गर्भवती वा दूध खुवाउने आमाबाट बच्चालाई पनि सर्छ ।
नेपाल सरकारले हेपाटाइटिस ‘बि’ को भ्याक्सिन दिने गरेको छ । त्यसैले अबका पुस्ताका बच्चालाई यसको सम्भावना निकै कम छ । यो खोप नलगाउनेले भने एकपटक परीक्षण गर्नु राम्रो हुन्छ ।
हेपाटाइटिस ‘सी’को कुरा गर्दा यो सबैभन्दा धेरै लागुऔषध प्रयोगकर्ताबाट सर्छ । जथाभावी सुई लगाउने वा ट्याटु खोप्ने गर्दा सर्न सक्छ । शरीरमा अरुको रगत चढाउँदा पनि परीक्षण गरेर मात्र गर्नुपर्छ ।
कलेजोमा बोसो जम्ने समस्या छ भने मोटोपन नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै डाक्टरको सल्लाह बिना औषधि कहिल्यै खानु हुँदैन र पानी सकेसम्म उमालेर वा राम्ररी शुद्धीकरण गरेर मात्र खानाले पनि यसबाट बच्न सकिन्छ ।
कलेजोमा जम्मा हुने कोलेस्टेरोल यी खानाहरू घटाउछ
Don't Miss it विश्वमै पहिलो पटक थ्रीडी प्रिन्टरबाट कोशिका र धमनीसहितको मुटु निर्माण
Up Next बहुगुणी जीरा र सक्खर पानीमा मिसाएर खाँदा कुन कुन रोगबाट बच्न सकिन्छ ? जान्नुहोस
१. मृगौलाका रोगी – डाइलोसिस गर्ने व्यक्तिलाई संक्रमणका कारण कलेजो क्यान्सरको खतरा बढेर जान्छ । २. मधुमेहका रोगी – मधुमेहका…
योग गर्नुअघि यी कुरामा ध्यान दिनुपर्छ
१. योग कठिन आसनबाट सुरु गर्नु हुँदैन । सरलबाट कठिनतिर जानुपर्छ । २. जब तपाईँ बिमार हुनुहुन्छ भने योग नगर्नुहोस्…
के तपाईले फोक्सोमा जाली पर्ने भन्ने सुन्नुभएको छ ? बेलैमा उपचार नगरे मृत्यु समेत हुन सक्छ (भिडीयोसहित)
फोक्सोमा लाग्ने रोग अन्य रोगको तुलानामा केही जटिल मानिन्छ । फोक्सोमा लाग्ने रोगमध्ये फोक्सोमा जाली पर्ने पनि एक हो ।…